कुकुर तिहार : 'बक्सर' सँग विछोडिएको दिन- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
भनिन्छ मानिस भगवानको उत्कृष्टतम् सृजना हो । तर कामको आधारमा यसको उल्टो भन्न सकिन्छ । मानिसले महान् कर्म गरेका छन्, बेइमानी पनि मान्छेले नै गर्छ । प्रकृति लगायत अन्य प्राणीले बेइमानी गर्न सक्दैनन् ।
कार्तिक १०, २०७६ दिवाकर बागचन्द
काठमाडौँ — मलाई सानैदेखि मानिसभन्दा जनावर मन पर्छ । त्यसमा पनि कुकुर मेरो प्रिय । कुकुरको मानव प्रेम, स्वामी भक्ति, इमान्दारीबारे थाहा नहुने सायदै कोही होलान् ।
केही दिन अगाडिको कुरा हो, अस्ट्रेलियामा रहेको मेरो कान्छो भाइको एउटा लामो इमेल पाएँ । उनले इमेलको सब्जेक्टमा लेखेका थिए-'बक्सरनामा'। मलाई थाहा थियो बक्सर मेरो भाइले पालेको कुकुरको नाम हो । बक्सरनामा भन्ने शब्दले कौतुहलता पैदा गर्‍यो । बक्सरनामा भनेर मलाई किन मेल गरेछ ? म अलि अन्योलमा परेँ। मेल क्लिक गरें । सुरुआती केही हरफ नै हृदयस्पर्शी थिए ।
'दाजु म पेसाले इन्जिनियर, शब्दसँग खेल्न जान्दिनँ। कतिपयले मलाई टेक्निकल सोच्छन्, भावना र मनका कुरा बुझ्दैन भन्छन् । यसमा मेरो भन्नु केही छैन । भन्नेको के नै जान्छ र ? म त्यसको जवाफ दिन चाहन्न । तर मनको उकुसमुकुस हजुरसामु राख्न चाहन्छु । किनकि हजुरले भन्दै आउनुभएको छ, मेरो जीवन नै मेरो पढाइ हो। मलाई लाग्छ मेरो जीवनको एउटा यस्तो पाटो जो मैले सबैबाट छुपाएर राखेको थिएँ, हजुरले पढेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ ।'
मेरो उत्सुकता झनै बढ्दै गयो, म पढ्दै गएँ। बक्सरलाई मैले जर्मन सेफर्डको बच्चा सोंचेको थिएँ, एक लावारिस कुकुरको सन्तान पो रहेछ। म चाहिँ अचम्मित भएँ । मेरो भाइले इमेलमा यसको कथा खोलेको रहेछ ।
लेखेको थियो, 'म लामो बेलायत बसाईपछि परिवारसहित नेपाल फर्केको थिएँ । नेपालमा बसेर देशका लागि केही गर्छु भन्ने जोशका साथ हामी फर्केका थियौं। म नोकरीको खोजीमा थिएँ । बेलायतमा कमाएको पैसाले किनेको घरबाहेक हामीसँग केही थिएन । दिनभरि नोकरीका लागि चाकडीचाप्लुसी बिन्ती अनुनयविनयको भद्दा नाटक गरेर म थकित भएर घर फर्कंदै थिएँ। बालकुमारी पुलबाट भित्र जाने गल्लीमा एउटा कुकुर आफ्ना पाँच छाउराका साथ हिँडिरहेकी थिइ। धुलाम्मे गल्लीमा अन्य कुकुर उसलाई देखेर भुक्दै थिए। ठेलावाला र पसलेहरु छिःछि र दुरदुर गर्दै थिए। मलाई के भो कुन्नी, आँखाबाट आँसु धारा बग्न थाले। आफ्नो दुई जनाको परिवार पालन धौ-धौ भएको बेला ५ छाउरा र आमालाई घर लगेर पाल्ने ल्यागत ममा थिएन। भगवानसँग माफी मागे एउटा बच्चालाई उसकी आमाबाट टाढा गर्नु परेकोमा । ५ मध्येको सबैभन्दा दुब्लो र पातलो छाउरा लिएर म घरतर्फ लागें। '
'नोकरी खोज्न गएको पति एउटा लिखुरे छाउरा लिएर आएपछि, मेरी अर्धाङ्गिनीको आँखामा विस्मय देखिनु स्वाभाविक थियो । तर त्यो छाउरा साथीकोबाट ल्याएको भनेपछि विस्मय मुस्कानमा परिणत हुन समय लागेन । म चाहन्थे उसलाई कसैले हेयको दृस्टीले नहेरोस् । दुवै जनाले उसको नामकरण पनि त्यतिखेरै गर्‍यौं। नाम राख्यौं "बक्सर" । नामकरणसँगै अन्नप्राशन पनि गर्‍यौं, मासु भात दिएर । चिसो हुन्छ कि भनेर आफ्नो टि-सर्ट उसलाई लगाइदिए । उसलाई पौष्टिक आहार दिन थाल्यौं । कुखुराको टाउको खुट्टा उसको मन पर्ने नियमित आहार बन्यो । खसीको मासुमा उसले रुचि देखाएन । लगतै भेटनरी डाक्टरलाई देखायौं । खोप इत्यादि लगायौं । नामझैँ बक्सर तगडा हुँदै गयो । उसको भुकाइमा बाघको गर्जन थियो । घरमा आउने आफन्तलाई अंकमाल गर्न जान्थ्यो, यति बेगमा जान्थ्यो कि कतिपय त लड्थे । अलि चकचके पनि थियो, चप्पल टोपी लिएर भाग्थ्यो । मैले लट्ठी देखाएपछि मात्र डराउँथ्यो ।'
'केही समयपछि श्रीमती पढाइ गर्न थालिन् । मैले पनि करारमा नोकरी पाएँ । बिहानै बक्सरलाई ख्वाईवरी हामी आ-आफ्नो काममा निक्लँथ्यौं । साँझपख घर पुग्थ्यौं । उ हाम्रो प्रतिक्षामा व्यग्रताका साथ गेटमा हुन्थ्यो । बक्सर दिनभर घरमा एक्लै हुन थाल्यो । मर्निङ्गवाकमा लैजान सुरु गरेँ । उ अरु कुकुरप्रति आक्रामक हुन थाल्यो । वाकमा जाँदा मलाई नै तान्थ्यो । घरमै खुसी देखेपछि मैले उसलाई मर्निङ्गवाक लग्न बन्द गरेँ । उ एउटा कमिलालाई पनि घरभित्र छिर्न दिन्थेन । केही दिनपछि एउटा गिटार किनेँ, आँगनमा बसेर म गिटार बजाउँदा बक्सर नजिक आएर बस्थ्यो । मेरो बेसुरा आवाज मन पराउने सायद एउटा उ मात्र थियो. . जब म "फूलैफूल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन भन्ने गीत गाउँथे उ मेरो आँखामा हेर्थ्यो । मलाई थाहा थिएन उ यसो किन गर्थ्यो तर उसको यो हर्कतले मेरो ईश्वरप्रतिको आस्था प्रगाढ हुँदै गयो । बक्सर घर र घरको पर्खालभित्र नै रमाउन थाल्यो। यो नै उसको दुनियाँ थियो ।'
'एक पटक काकाको घरमा पाटी थियो बक्सरलाई लिएर गएका थियौं, राति उतै बस्नेगरी । तर बक्सरले उता बस्न मानेन, उसलाई घरमा छोडेर पुन: काकाको घरमा फर्क्यौं । घर पुग्दा उसको आँखामा जुन चमक थियो त्यसलाई शब्द या चित्रमा बयान गर्न सकिन्न । केवल महसुस गर्न सकिन्थ्यो । वास्तवमा त्यो घर बक्सरको थियो ।'
'नेपालमा बसेर देशको सानै रुपमा भए पनि सेवा गर्छु भन्ने जुन अठोटका साथ हामी आएका थियौं, त्यो घडीको सुइसँगै कम्जोर हुँदै गइरहेको थियो । जुन माटोलाई म माया गर्थें त्यहाँ बाँच्ने कला या तिकडम हामीमा थिएन । मेरो अठोटमा कुनै दम थिएन । अठोट टुटेर हार्नुभन्दा पहिले हामी दुइ श्रीमान्/श्रीमतीले देश छोड्ने निर्णय गर्यौं। तर बक्सरबाट टाढा हुन चाहन्न थियौं । साथमा लगेर जाने सम्भवना पनि थिएन। मन भत्भती पोल्यो। बाध्यता थियो नोकरी कहिले जाने हो ठेगान थिएन । नेपालमा बसेर बक्सरलाई उचित आहार पनि दिन सक्ने अवस्था पनि नहुन सक्थ्यो । त्यसैले बक्सरलाई ठुलो दाजु र भाउजुको जिम्मा लगाएर हामीले बिदेशिने तयारी गर्‍यौं । म अलि 'प्रग्म्याटिक” (pragmatic) भएर होला ममा भावना छैन भनेको ।
'दाजु हजुरले मैले नेपाल छोड्दा बक्सरलाई अंकमाल गरेको फोटो फेसबुकमा हाल्नु भएको रहेछ । म आज भन्छु , मैले त्यति बेला रोएर भनेको थिएँ, बक्सर मेरो भाइ मलाई माफ गर्नु, तँलाई छोडेर जाने मलाई एकरत्ति मन छैन । तलाई थाहा छ, अरुलाई कुल्चेर हिँड्ने यो देशमा म तेरो पनि हेरचाह ठीकसँग गर्न सक्ने छैन । म तँलाई भेट्न बारबार आउनेछु मेरो भाइ । यो देशमा मैले भेटेको एउटा मात्र सच्चा साथी तँ मात्र होस् मेरा लागि । बक्सरलाई अंकमाल गरेपछि म पछाडि फर्केनँ, म उसको आँखामा आँसु देख्न सक्दैनथे। सिधै एयरपोर्ट लागेँ ।”
'दुई वर्ष बितिसकेको छ, मैले बक्सरलाई भेटेको छैन । आँखिर मान्छे जो हुँ म । ठूलो दाजु भाउजुसँग इस्कैपमा कुरा गर्दा बक्सर कान ठाडो पारेर मलाई सुन्छ र हेर्छ, अनि रिसाएझैँ गरी बाहिर जान्छ । केही महिना पहिले मम्मीसँग बक्सरका लागि ज्याकेट र खाने कुरा पठाएको थिए । दाजुले भनेअनुसार बक्सरले केही दिन त मैले पठाएको सामान हेरीमात्र रह्यो, आँखाभरि आँसु लिएर । म छिट्टै बक्सरलाई भेट्न नेपाल जाँदैछु । अंकमाल गर्ने छु । दाजु म इन्जिनियर जरुर हुँ, तर त्यो भन्दा माथि, "बेजुबान" हरु को भाषा बुझ्ने एउटा मन भएको मान्छे हुँ ।'
मेरो भाइको इमेल अंग्रेजीमा थियो, पढ्न र बुझ्न मलाई केही समय लाग्यो । मैले तुरुन्त नेपालमा दाजुलाई फोन गरेँ । बक्सरको हालचाल सोधेँ । दाजुले के भन्नु त्यो झन् अप्रत्यासित र अद्भूत थियो । "बक्सर इज मै चाइल्ड । हि इज अ जेन्टल म्यान उहाँ ले भन्नुभो" मेरी छोरीले आँखा घोची दिँदा पनि केही गर्दैन, छोरीले बक्क भनेर बोलाउँदा खुरक्क आउँछ । मलाई बिसन्चो भए, मेरो खाटको छेउमा धर्ना दिन्छ। '
'केही समय पहिले एउटा भाइको जिम्मा लगाएर हामी सपरिवार १० दिनका लागि मुम्बई गएका थियौं । ती दस दिनमा उसले खाना त के पानी पनि पिएन रे । गेटमा बसेर आँसु झारिरहन्थ्यो छिमेकी आन्टीले भावुक हुँदै हामीलाई सुनाउनुभो। यी सब कुरा सुनेपछि हामीले बक्सरलाई छोडेर कहीं नजाने निधो गर्यौं। '
'बक्सर कुकुर होइन तपस्वी हो । जो हाम्रो यादमा अन्न, जल सब त्याग छ, जो हामीलाई देखेपछि सजातिए कुकुरको साथ पनि खोज्दैन, जो ब्रह्मचर्यको पालन गर्छ, जसको लागि यो घर मन्दिर हो, त्यो तपस्वी नभई के हो ?' दाजुले भन्नु भो ।
म केही बोलिनँ । फोन राखेँ र दाजुका शब्द दोहर्‍याएँ । 'बक्सर कुकुर होइन तपस्वी हो ।' प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ १३:५४
असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने : प्रधानमन्त्री ओली
कार्तिक १०, २०७६ जगदीश्वर पाण्डे
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिरहने बताएका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको १८ औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरी आइतबार नेपाल फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा यस्तो बताएका हुन् ।
असंलग्न अभियानबाट नेपालले कस्तो फाइदा लिने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ओलीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र, असंलग्न नीति, विश्व शान्तिको पक्ष, समानताको पक्षमा, राज्यहरू बीचको सहकार्यको पक्षमा, सह–अस्तित्वको पक्षमा खासगरी पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनमास्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनकै मुलुकहरुबीच विवाद छ भने त्यो शान्तिपूर्ण ढंगबाट संवादको माध्यमबाट हल गर्नु पर्ने बताए । उनले नेपालले इमान्दारीका साथ असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन पर्ने पनि प्रस्ट पारे । हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनबाट कसले कसको पक्षमा लिने भन्ने नभएको बताए । ‘विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने हो । निशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिने हो । विनाशका अस्त्रहरु उत्पादनमा निरुत्साहित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो संगठन दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको हो र अहिले पहिलेको भन्दा बढी हतियार छन् तर लडाइँ भएको छैन ।’
विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा यो आन्दोलनले साना–ठूला सबै मुलुकहरूको सहअस्तित्व, सार्वभौमिकता र समानतालाई जोड दिएको ओलीले बताए । उनले नेपाल अहिले नै यो आन्दोलनबाट ठूलो भाग लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रस्ट पारे । ‘अहिले हामी यस्तो सम्मेलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस पटक एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष भएका छौं । एउटा सत्रको सञ्चालन गर्‍यौं । विस्तारै आफ्नो भूमिकालाई बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने ।
१८ औं शिखर सम्मेलनले बाकु घोषणा पत्र र अन्तिम दस्तावेज पनि पारित गरेको छ । बाकु घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता, संयुक्त स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, आन्दोलनका सदस्यहरूबीच आन्तरिक एकता र सद्भाव, ऐक्यबद्धता, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा ५ बुँदे सुझाव दिएका थिए । उनले असंलग्न आन्दोलनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने, सदस्यहरू बीचमा रहेको मतभेद अन्त्य गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । ओलीले विभिन्न मुलुकका राष्ट्र र राष्ट्र प्रमुखहरूबाट आएकै सुझावका आधारमा बाकु घोषणा पत्र जारी गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अन्य मन्त्रीहरू, सचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा राष्ट्रय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले स्वागत गरेका थिए ।
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित श्रीमती राधिका शाक्य, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतकुमार राईसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालले सञ्चारमाध्यमलाई सुरूआतमा प्रधानमन्त्री ओलीले र नेपालको तर्फबाट त्यहाँ भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।
सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ १३:१९